မျက်ရည်အဘယ်သူမျှမမီးခိုးအဖြူ Flute ဖယောင်းတိုင်အဘယ်သူမျှမ - တရုတ် Litbright ဖယောင်းတိုင် (shijiazhuang)
Litbright ဖယောင်းတိုင် (shijiazhuang) Co. , Ltd မှ
ဘုရားကျောင်း / မဏ္ဏိုင်ဖယောင်းတိုင်
အလှဆင်ဖယောင်းတိုင် / အနုပညာဖယောင်းတိုင်
အဝေးမှအရောင်အသွေးစုံသော Led ဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူ LED ကိုဖယောင်းတိုင်
အိုင်ဗရီကို့စ်ဒီဇိုင်းဇိမ်ခံကားစုစည်းမှုနှင့်အတူ Set LED ဖယောင်းတိုင်
ဦးဆောင်တောက်ပ flickering round ပုံသဏ္ဍာန် flameless
ဆင်စွယ်မတရားသောသူသည် luminaire votive ဖယောင်းတိုင် set ကို Moving
multi ရိတ်သိမ်းဆောင်းဦးရာသီအရွက်မဏ္ဏိုင်ဖယောင်းတိုင် LED
ပွဲတော်အလှဆင်ရနံ့နှင့်ရောင်စုံ tealight နိုင် ...
သတ္တုခွက်ထဲမှာ 8g-23g အသွေးအရောင်စုံ tealight ဖယောင်းတိုင်
မျက်ရည်အဘယ်သူမျှမမီးခိုးအဖြူ Flute ဖယောင်းတိုင်အဘယ်သူမျှမ
အခြေခံပညာအင်ဖိုမော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G65CL-0625D အမျိုးအစား: Tapered ပစ္စည်း: Paraffin ဖယောင်းရုပ်အသုံးပြုမှု: စျာပနအခမ်းအနား, အားလပ်ရက်, SPA ကုမ္ပဏီ, ဘာသာရေး, မင်္ဂလာဆောင်, ပါတီ, မွေးနေ့, ပင်မစာမျက်နှာ Lighting, Decoration အမည်: Lighting အရောင်: White ကအရသာ: ရှိကြသည်အရွယ်အစား: 8 * 20cm အချိန်ကိုမီးရှို့: 8H ထုတ်ယူခြင်း: စက်အချင်း; 2.2cm: အလျား: 22.5cm နောက်ထပ်အင်ဖိုထုပ်ပိုး: 36tons အမှတ်တံဆိပ်: Litbright သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, Air လေကြောင်းလိုင်း, မူလအစ၏ TNT DHL UPS Place: တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း:3ထုပ်ပိုးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား shrinked သို့မဟုတ်အိတ် × Certified 20'fcl ...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G65CL-0625D
ပစ္စည်း: Paraffin ဖယောင်းရုပ်
အသုံးပြုမှု: စျာပနအခမ်းအနား, အားလပ်ရက်, SPA ကုမ္ပဏီ, ဘာသာရေး, မင်္ဂလာဆောင်, ပါတီ, မွေးနေ့, ပင်မစာမျက်နှာ Lighting, Decoration
Size ကို: 8 * 20cm
အချင်း; 2.2cm: အလျား: 22.5cm
ထုပ်ပိုး: shrinked သို့မဟုတ်အိတ်ထုပ်ပိုး
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, Air လေကြောင်းလိုင်း, TNT DHL UPS
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း:3× 20'fcl
လက်မှတ်: BSCI BV MSDS
အဖြူရောင်ဖယောင်းတိုင်, Multi-အရောင် Flute ဖယောင်းတိုင်အဖြူ, taper ဖယောင်းတိုင်, Multi-အရောင် taper ဖယောင်းတိုင် fluted ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများထဲမှအခြား 70% paraffin ဖယောင်းများနှင့် 30% ဆီအုန်းဖြစ်ပါသည် 100% Paraffin ဖယောင်းရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထုပ်ထုပ်ပိုး, box ကိုထုပ်ပိုး, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် cellophane ထုပ်ပိုးကျုံ့ polybag နေကြတယ်, ငါတို့သည်လည်းဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်များဖြစ်ကြသည်: သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်ဆိုအရောင် ... အဖြူ, အနက်, အစိမ်း, အဝါ, အပြာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ dripless, smokeless, အနံ့, မြင့်မားသောအရည်ပျော်မှတ် (58 ° C မှ-60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်စုဖယောင်းတိုင်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော grammers အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားရှိသည်, ယင်း grammers 7g ထံမှ 100g ဖြစ်ကြောင်း, ထိုအချင်း 1.1cm ထံမှ 2.5cm မှဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဂရမ်, ချင်းအလျားနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Hebei တရုတ် (ပြည်မကြီး),
အချင်း: 2cm အလျား: 27.5cm
Litbright ဖယောင်းတိုင်စက်ရုံနောက်ဆုံးရာစုကိုးဆယ်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးအတွက်စက်ရုံနဲ့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျနော်တို့ဖယောင်းတိုင်တင်ပို့၏ 10 နှစျကျြောရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံဧရိယာအကြောင်းကို 48,000 စတုရန်းမီတာနှင့်ကျွန်တော် Hebei အတွက်အကြီးမားဆုံးဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ 800skilled ကျော်လုပ်သားများနှင့် 40 ပညာရှင်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်:4× 20 ပစ္စည်းများကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည်များအကြားအလွန်ရေပန်းစားနေသောအဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများ, ဖြစ်ကြ၏ /day.These '' ကွန်တိန်နာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ထက်ပိုမိုရှစ်ဆယ်နိုင်ငံများစသည်တို့, အမေရိက, ဥရောပ, အာဖရိကနှင့်သြစတြေးလျမှတင်ပို့ခဲ့ကြသည်။
အိမ်သူအိမ်သားဖယောင်းတိုင်, အဝေးထိန်း flameless ဖန်အိုး, တောက်ပဖယောင်းတိုင်, tealight ဖယောင်းတိုင်, မှတ်တိုင်ဖယောင်းတိုင်, ဆုကြေးဇူးကိုဖယောင်းတိုင်, ဖယောင်းတိုင်, ဂျူးဖယောင်းတိုင်, ဘောလုံးကိုဖယောင်းတိုင်, taper ဖယောင်းတိုင်, votive ဖယောင်းတိုင်အတွက်ဖယောင်းတိုင်, ဖယောင်းတိုင်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကောင်းသောအရည်အသွေး, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်ထောက်ထားဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဖောက်သည်တွေနဲ့ကောင်းသောဆက်ဆံရေး establsih ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဆက်လက်လိမ့်မည်, ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ကြိုဆိုပါတယ်။
အမည်: Flute ဖယောင်းတိုင်
အလေးချိန်: 10,12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80g, 85g, 90g, 95g, 100g, etc
ထုပ်ပိုး: cellophane, ပလပ်စတစ်အိတ်, box ကို Kraft စက္ကူ
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း: Paraffin ဖယောင်း, Stearic အက်ဆစ်
မြင့်မားသောအရည်ပျော်မှတ်: 58 ° C မှ - 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရရှိနိုင် 1. နမူနာ
2. OEM လက်ခံ
40cm White ကမဏ္ဏိုင်ဖယောင်းတိုင်
ဖယောင်းတိုင်ကွန်တိန်နာ အဖြူရောင်, r
ဖယောင်းတိုင် Lantern အဖြူ
အမျိုးမျိုးအရွယ်အစား White ကမဏ္ဏိုင်ဖယောင်းတိုင်
Led Taper ဖယောင်းတိုင်အဖြူ Flame ဟာ
ဖယောင်းတိုင် Holder နှင့်အတူအဖြူရောင်အိန်ဂျယ်
အဖြူရောင်ကြွေ Votive ဖယောင်းတိုင် Holder လက်ကား
White က Glass ကိုဖယောင်းတိုင်ပုလင်း
အဖုံးနှင့်အတူ White က Glass ကိုဖယောင်းတိုင်ပုလင်း
White, စကျင်ကျောက်ဖယောင်းတိုင် Holder
အဖြူရောင်ဖျ Paraffin ဖယောင်းတိုင်
100% Hand အံဝင်ခွင်ကျ Taper ဖယောင်းတိုင်သွန်းလောင်း
စက်ရုံစျေးနှုန်းနေ့စဉ်ရှိကြသည်အဖြူ househo ကိုသုံးပါ ...
2018 လူကြိုက်များဒီဇိုင်းအဖြူအိမ်ထောင်စုက c flameless ...
ကောင်းသောအဘိုးနှင့်စူပါမားကတ်များအတွက် Walmart ဖယောင်းတိုင်
စင်ကြယ်သော paraffine ဖယောင်းအဖြူရောင်ဖယောင်းတိုင်
RM 702, Bldg, တစ်ဦးက Lingshi Comm.Bldg ။ , NO.351 ဆင်ဟွာလမ်း, Shijiazhuang, Hebei, တရုတ်